प्रेमिकालाई सोध्नै नहुने यस्ता प्रश्नहरु « हाम्रो ईकोनोमी
प्रेमिकालाई सोध्नै नहुने यस्ता प्रश्नहरु
भनिन्छ, केटीहरूको मन बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ । जुन एकहदसम्म सत्य पनि हो । किनकि केटीहरूको दिमागमा के चलिरहेको छ, कसैलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले त भेटभएको बेलामा केटीहरुलाई आफ्नो प्रेमीले त्यस्ता प्रश्नहरु नै नगरुन् भन्ने सोचाई उनीहरुमा आइरहेको हुन्छ । उनीहरु भेटको क्रममा प्रेमीले आफूले लुकाएको कुरा नसोधोस् भन्ने सोचाई राख्छन् ।
म तिम्रो पहिलो प्रेम हुँ ?
हरेक केटाले आफ्नी प्रेमिकालाई आफू पहिलो प्रेमी हो या होइन ? भनेर सोध्न चाहन्छन् । केटीहरुलाई आफ्नो केटा साथीभन्दा बाहेक पनि अरु नै कोही मन परिरहेको हुन्छ । चाहे त्यो उनको पूर्व प्रेमी नै किन नहोस् । त्यसैले केटाहरुले पनि आफू पहिलो प्रेमी हो कि होइन ? भनेर सोध्ने गर्छन् । तर, केटीहरु आफ्नो प्रेमीले त्यस्तो प्रश्न नगरोस् भन्ने चाहन्छन् ।
आमासँग किनमेलमा जाने हो ?
घरपरिवारहरुसँग नजिक गराउनको लागि केटाहरुले केटीसाथीलाई आफ्नी आमासँग किनमेल गर्न जाने बेलामा सँगै लैजाने प्रयास गर्छन् । ताकि आमाले यसै बहानामा उनीहरूलाई अझ राम्ररी चिन्न सकून् । तर, केटीहरू प्रायः प्रेमीको आमासँग किनमेल गर्न जान डराउँछन् । त्यसैले यस्तो प्रस्तावमा अधिकांश प्रेमिकाले नकार्ने गर्छन् ।
तिम्रा अभिभावकले मलाई मनपराउँछन् कि पराउँदैनन् ?
केटाहरूको लागि आफ्नी प्रेमिकाको आमा बुबासँग भेट्नु सबैभन्दा गाह्रो कुरा हो । तर, केटाहरु परिवारसँग भेट्न लैजानको लागि सधैं आग्रह गरिरहन्छन् । तर, यो आग्रहले केटीहरूलाई आफैंमा यति तनावग्रस्त बनाइदिन्छन् कि उनीहरू यो प्रस्तावबाटै भाग्ने प्रयास गर्छन् ।
मेरी साथी वा बहिनी कति सुन्दर छिन् है ?
हरेक केटाले प्रेमिकालाई उनी आˆनो बहिनी वा साथीको बारेमा सोध्न सक्छन् । तर, केटीहरू यस्ता चीजहरूबाट टाढा रहन मनपराउँछन् । उनीहरुलाई अरुको सुन्दरताको तारिफले आफूलाई कमजोर सम्झिएको अनुभूति हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता प्रश्नहरुको केटीहरु खासै उत्तर दिँदैनन् ।
अब अन्य कुनै केटालाई मन त पराउँदैनौं नि ?
केटाहरूको दिमागमा सधैं एउटै डर हुन्छ कि आफ्नी प्रेमिका अरुसँग नै प्रेम गर्छिन् कि ? आफ्नी प्रेमिका कुनैपनि हालतमा आक्रोशित नबनून् । यो हरेक प्रेमीले सोचिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा यो असंवेदनशीलताको कारण उसले आफ्नी प्रेमिकालाई अरु कसैसँग प्रेम त गर्दैनौं नि ? भन्ने प्रश्न गर्नसक्छन् । यो प्रश्न प्रेमिकाको लागि गम्भीर प्रश्न हुनसक्छ । त्यसैले यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ ।
एमसिसीका विरूद्व बाजुराका युवाहरु सडकमा उत्रिए
एमसिसीका विरूद्वमा बाजुराका युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन् । सरकारले एमसिसी नेपालकाे हित
एसइईबारे एकसाताभित्र निर्णय हुन्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई),
कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा दशौं व्यक्तिको मृत्यु
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संकमणका कारण नेपाल थप एक जनाको मृत्यु भएको छ
थप ३३४ जनामा कोरोना, संक्रमितकाे संख्या २६ सय २९ पुग्यो
पछिल्लो २४ घण्टामा बिहीबार थप ३३४ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ
आदिम कालदेखि आधुनिक युगसम्मका २४ महामारी, यस्तो छ
प्रचण्डलाई ओलीले भनेः मिल्न नसक्ने भए अलग हौँ
ट्रान्सपोर्टको नाममा तातोपानीबाट सुन तस्करी, यी हुन मुख्य
शान्ति सुरक्षामा खटेको प्रहरीमाथि आक्रमण